Maxaa Lagu Xidhay Cabdimaalik Coldoon? – somalilandtoday.com
(SLT-Burco)-Ciidamada booliska Somaliland ayaa galabta Magaalada Burco ku xidhay Suxufi/Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo la sheegay in ay goobtiisa shaqo ka soo xidheen. Ma jiro war rasmi ah oo boolisku ka soo saaray xadhigga Mr Coldoon laakiin, waxa la arkayay Muuqaallo iyo sawirro muujinaya booliska oo xabsiga u wada Coldoon.
Madaxweyne Biixi ayaa fagaare ka sheegay hadalka uu ku difaacayo Abaarso School oo loo fahmay in uu jawaab u yahay eedaha Coldoon.
Arrimahan ayaa muujinaya in Xukumadda Madaxweyne Biixi la safan tahay Xarumaha uu Coldoon dhalliilay, islamarkaana xadhiggiisu salka ku hayo eedaha uu xarumahaas u jeediyay, Halkan hoose ka DAAWO